အားလုံး Translator - Voice ကို, ကင်မရာ, ဘာသာစကားအားလုံး | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ပညာရေး Apps ကပ » အားလုံး Translator - Voice ကို, ကင်မရာ, ဘာသာစကားအားလုံး
အားလုံး Translator - Voice ကို, ကင်မရာ, ဘာသာစကားအားလုံး APK ကို
အားလုံးဘာသာပြန်ဆိုသူတူသောသုံးဘာသာပြန်ဆိုသူပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည် ကင်မရာကိုဘာသာပြန်ဆိုသူ, စကားသံကိုဘာသာပြန်ဆိုသူ, အားလုံးဘာသာစကားဘာသာပြန်ဆိုသူ ဒီအေးမြပြောနေတာဘာသာပြန်ဆိုသူ available.Use အလုံးစုံဘာသာစကားများချက်ချင်း 150 ဘာသာစကားများမဆိုသို့မဆိုစာသားကိုဘာသာပြန်ဆိုအတွက်! ဒါဟာအစသင်တို့အဘို့ဘာသာပြန်ချက်ညော။
Translate ဓာတ်ပုံ app ကိုမဆိုပုံနှိပ်သတင်းရင်းမြစ်ဓါတ်ပုံထဲကနေစာသားများ extracts: စာရွက်စာတမ်းများ, စာအုပ်များ, နိမိတ်လက္ခဏာများ, ညွှန်ကြားချက်သို့မဟုတ်ကြေညာချက်များနှင့်ချက်ချင်း 150 ဘာသာစကားများမဆိုသူတို့ကိုဘာသာပြန်ဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်။ စာသား၏ရုပ်ပုံကို ယူ. စာသားအသိအမှတ်ပြုပြီးနောက်, သင်ချက်ချင်း, တည်းဖြတ်နားထောငျဘာသာပြန်ဆို, Facebook ပေါ်တွင်မျှဝေ, Dropbox သို့မဟုတ်ရိုးရိုးအီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်
အားလုံးဘာသာစကားများ Translator စကားလုံးများကိုသို့မဟုတ်စာသားဘာသာပြန်ဆိုအခမဲ့ App ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကိုကမ္ဘာ၏မည်သည့်ဒေသသို့မဟုတ်နိုင်ငံခရီးသွားလာရန်, ခရီးသွားဧည့်များအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေရပါမည်, စကမိန့်ခွန်းဘာသာပြန်အထောက်အပံ့များမှစာသားကိုပေးပါသည်။
အလျင်မြန်ဆုံးအားလုံး Translator သုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်, Voice ကိုဘာသာပြန်ဆိုသူပွင့်လင်း box ထဲမှာ data တွေကိုရိုက်ထည့်ပါသင်ဟာအဖြေကိုမြင်ရပါလိမ့်မည် button ကိုဘာသာပြန်ဆိုကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သငျသညျစာကြောင်းဘာသာပြန်ဆိုမြင်လိမ့်မည်။ ထို့နောက်သီးနှံကလစ်ရလဒ် display ကိုဘာသာပြန်ဆိုကင်မရာသို့စပြခန်းများမှတဆင့်ဓာတ်ပုံကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုအတွက်ကင်မရာကိုဘာသာပြန်ဆိုသူအဖြစ်အတူတူပင်။
✔ဘာသာစကားအားလုံးကင်မရာ, အသံဖြင့်, စာသားဘာသာပြန်ဆိုသူ (အားလုံးဘာသာစကားများ Translator) တွင်ထောက်ခံခဲ့ကြသည်။
✔သန့်ရှင်း UI ကို & matrial ဒီဇိုင်း app ကို။
✔ဟော ပြော. အဘို့အ Voice ကိုဘာသာပြန်ဆိုသူနှင့်ဘာသာပြန်ရန်မဆိုစကားလုံးများနှင့်စာကြောင်းဘို့ကျမ်းစာ၌ရေးထား။
✔ Voice ကိုဒေတာအသုံးပြုသူမတိုင်မီကယ်တင်ဖျက်မှုနဲ့အော့ဖ်လိုင်းဖြစ်နေဘာသာပြန်ဆို။
✔ (အသံဘာသာပြန်ဆိုသူ) ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့စကားသံကို Translate ။
✔ Copy ကူးခြင်းနှင့်ငါးပိအရင်းအမြစ်နှင့်စာသားဘာသာပြန်ဆို။
✔နီးပါး 150 ဘာသာစကားများဘာသာပြန်ချက်ဖို့ Up ကိုထောကျပံ့
✔ Translate သင်၏စာသား (လူမှုရေးမီဒီယာသို့မဟုတ်အခြား) Share
✔ Learn ဘာသာစကားများလျင်မြန်စွာဘာသာစကားများဘာသာပြန်ဆို
အပြန်အလှန် LIKE ဘာသာစကားများကြားဘာသာပြန်ရန်စာသားအသံနောက်လိုက်ခြင်း။ :
အာဖရိက, ဂရိလျဘေးနီးယနျး, အာရ, Azerbaijani-, အဘိဓါန် Basque-, ဘင်္ဂါလီ, Belorussian, ဘူဂေးရီးယား, ကာတာလ, တရုတ်, ရိုအရှေ, ခကျြ, ဒိန်းမတ်, ဒတျချြ, အင်္ဂလိပ် (အမေရိကန်), အက်စပရန်, Estonian အဘိဓါန်, ဖိလစျ, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, Gallic, ဂျြောဂြီယ, ဂျာမန်, , ဂူဂြာရ, ဟာအီတီ, Creole, ဟီဘရူး, ဟိန္ဒူ, ဟနျဂရေီ, လန်, အငျဒိုနီးရှား, အိုငျးရ, အီတလီ, ဂျပန်, ကန်နာဒါ, ကိုးရီးယား, လက်တင်, လက်ဘီအံ, အာနီယံ, စီဒိုနီယံ, မလေး, မောလ်, ဘှ, ပါရှနျပိုလနျ, ပျေါတူဂီ, ရိုမေးနီးယား, ရုရှ , ဆားဗီးစလိုဗကျ, စလိုဗေးနီး, စပိနျ, ဆွာဟီလီ, ဆှီဒငျ, တမီး, ဂု, ထိုင်း, တူရကီ, ယူကရိန်း, ဒူ, ဗီယက်နမ်, ဝလေ, Yiddish- ။
အပြန်အလှန် LIKE ဘာသာစကားများကြားဘာသာပြန်ရန်စာသားကင်မရာနောက်လိုက်ခြင်း။ :
အပြန်အလှန် LIKE ဘာသာစကားများကြားဘာသာပြန်ရန် text စာသားနောက်လိုက်ခြင်း။ :
အမြင်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုဖတ်ပါ။
အားလုံး Translator - Voice ကို, ကင်မရာ, ဘာသာစကားအားလုံး
1.95 ကို MB
Voice ကို Translator အားဆင့်ဆိုရမည်